Xaqa ka badbaadinta qasabka | Dina Rättigheter
Xaqa ka badbaadinta qasabka
waxaad xaq u leedahay degaan aamin ah (Göteborg)
waxaad xaq u leedahay nolol aan lahay qasab iyo midabtakoorid! Jidhkaaga adiga ayaa iska leh!
Sida xeeraka calamiga ah qorayo haweenka oo dhan xitaa kuwa aan sharciga aan ku lahayn wadan wadamada kamid ah, waxay xaq u leeyihiin in laga badbaadiyo qasbida. Xitaa hadii aadan haysan sharciga deganaansha dalka Iswiidhan qofna xaq uma laha inuu kuu adeegsado qasbid, qof kamid ah ehelakaaga, madaxa shaqadaada, ka guriga aad ka kiraysatay, shaqaalaha u shaqeeyaya heyadahadawlada ,booliska. Marka qof kugu sameeyo wax aadan raali ka ahayn Maya!dheh oo iska celi xaq baad u lee dahay inaad is difaacdid.
Dalka Iswiidhan waxaa ka jira qaanuun lagu magacaabo Kvinnofridslagen. Qaanuunkaas oo sheegaya in dumarko ay xaq u leeyihiin in laga badbaadiyo qasbida, sida in la dejiyo degaan aminigiisu sugan yahay, kaas oo lagu magacaabo kvinnojour (hoyga haweenka dhibaataysan). Dumarka waxa ay kaloo xaq u leeyihiin in ay helaan taageero marka ay la xiriirayaan booliska ama maxakamada. Waan ka xunahay inta badan qanuunka Utlänningslagen (qaanuunka ajaanibka) baa ka hor mara Kvinnofridslagen, taas oo kelifaysa in dadka aan sharciga lahayn ay helin badbaadin. Way ku adag tahay kvinnojour in ay lacag ka helaan degmada si ay dhibta uga badbaadiyaan dadka aan sharciga lahayn.
Degmada göteborg ayaa go´aan ku gaartay sanadkii 2010 in dumarka aan sharciga lahayn in laga badbaadiyo qasabka.
Taas oo macnaheedu yahay in degmado ay lacag siiso kvinnojour hoyga haweenka dhibaataysan qaabila. Waan ka xunahay si fiican uma aysan hirgelin, laakin waxaa muhiim ah in aad ogtahay in aad ka dalban kartid degmada göteborg in laga badbaadiyo qasbida ama xooga.
Qasab ama xoog wuxuu noqan kara:
Qasab la xidhiidha jidhka; dhirbaaxo,jugsiin iyo xoog u qabsho.
Qasab la xidhiidha maskaxda; xaqiraad ama quursi, bahdilaad. hadidaad lagu hadidayo qasbid ama kantoroolida noloshada.
Qasab iyo dhibaatayn la xidhiidha isutaga ama galmada;in lagu la sexdo adoon raali ka ahayn, in aad gashatid wax aadan raali ka ahayn ama lagu qasbo inaad samaysid qaab galmo aadan raali ka ahayn.
Hadii aad ku nooshahay nolol qasab iyo xoog ku dhisan, ka feker:
inaad ku haysatid koobiga waraaqaha muhiimka ah, sida baasboorka iyo kuwa kale ee aqoonsiga ah, meel aamin ah.
in boorso ku diyaarsatid dhar, dawo iyo waxa kale ee aad adiga iyo (caruurtaadu)u baahantihiin .
in aad ogaatid xuquuqdaada, taageero iyo caawimaad ka raadisid internetka, bugaagta, saaxibada iyo hey´adaha.
Taagero bilaash ah, talo iyo warbixin ku shaqale ka badbaadinta qasabka ama xooga:
Kvinnojouren Terrafem: 020 – 52 10 10
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS): 020 – 50 50 50
Stödnätet: 031 – 331 21 79 eller 031 – 331 99 02
Finska Kvinnojouren Piilopirtti i Angered: 031 – 330 25 56
Ingen människa är illegal: 0704-37 75 24